बदलिदो तन्नेरी लुक | नेपाल इटाली डट कम
बदलिदो तन्नेरी लुक
November 3, 2011 — nepalitaly
तन्नेरीहरु आफ्नो हेयर स्टाइललाई नयाँ लुकमा ढाल्नुलाई नयाँ प्रयोग ठान्छन् । त्यसैले त अहिले बजारमा थरिथरिका कपालका शैलीहरु देखिन थालेको छ । “यो फेशन कन्ससनेश हो र नयाँ प्रयोग पनि,” शान्तिनगरका दिपितराज न्यौपाने भन्छन्, “पंक त योङहरुको ‘रिलिजन’ नै भइसक्यो ।” त्यसैले त कुनै चाड पर्व आउनै हुँदैन, अहिलेका युवाहरु कस्तो लुक बनाउने भन्ने कुरामा अधिकांश समय खर्चने गरेका छन् । उसो भए दिपिले यो तिहारमा कपालको शैली कस्तो बनाउलान् त ? “मोहक हार्ड कोर मलाई यही जमिरहेको छ,” उनी भन्छन् ।
एपेक्स कलेजमा बिबिए ८ औं सेमेस्टरमा अध्ययनरत दिपितले धेरैको आँखा त्यतै सोझिने गरी ‘मोहक हेयर स्टाइल’ बनाएका छन् । अंग्रेजी सांगीतिक ब्यान्ड ब्लिक १८२, प्यानटेराका गीतहरु सुन्दै प्रभावित बने उनी । अहिले उनले बनाएको कपालको शैलीलाई इमो पंक हेयर स्टाइल भन्छन् । “ट्रयाभीस वार्करको कपालबाट प्रभावित भएँ,” २१ वर्षीय यी तन्नेरीले भने, “कलेजमा पाइने स्वतन्त्रता मज्जाले उपयोग गरियो ।” उनी ‘पंक’ र ‘न्यू मेटल’ संगीतका पारखी हुन् । “मलाई बिन्दास र रफ टाइपको केटीहरु मनपर्छ क्या, आफूजस्तै,” उनी भन्छन्, “अरुको बारेमा किन सोच्ने ?”
नयाँ पुस्ता जो प्रायजसोः ‘वेस्टर्न’ गीतहरुमा झुम्छन्, उनीहरुमा कपालको प्रभाव यस्तै देखिन्छ । यो ‘मोहक हार्डकोर’ पंकहरुको हेयर स्टाइल हो । ‘इमो पंक’ स्टाइल एक्लै बस्न चाहनेहरुले रोज्छन् ।
‘भि-स्यागी’ हेयर स्टाइलमा सजिएर केश फट्काउँदै हिँडछिन्, जेनी राई । यो नेपाली तन्नेरीहरुमाझ बढ्ता चल्तीमा रहेको हेयर स्टाइल हो । “राम्रो लागेपछि मैले पनि ‘फलो’ गरेँ” जेनीले भनिन् । यस्तो कपाल बनाउँदा कस्तो कमेन्ट आउँदोरहेछ त ? “किन ? त्यस्तो हाँस उठ्दो छ र मेरो हेयरस्टाइल ?,” कपनकी १८ वर्षीया यी तन्नेरी प्रतिप्रश्न गर्दै सुनाउँछिन् “भेरी फ्यान्टास्टीक । क्या सेक्सी रे, हिहिहि ।” कति केटाहरु त उनकै हेयरस्टाइल देखेरै मक्ख पर्छन् रे ! “कतिले त यस्सो प्रपोज पनि हानिहाल्छन्,” उनले भनिन्, “तर, मलाई लभमा विश्वास लाग्दैन ।” उनले दशैंमा बनाएको कपालको शैलीबाट सन्तुष्ट भइनसकेकाले तिहारमा कुनै पनि नयाँ लुक नदिने र पुरानैलाई निरन्तरता दिने बताइन् ।
अरु केटीहरु भन्दा फरक देखिन ‘इन्ट्रेस्ट’ लागेर ‘न्यू लुक’ हेयर स्टाइल बनाएको एरिका सिथलिङ बताउँछिन् । धरानबाट काठमाडौं पसेपछि ‘रक गञ्ज’ हेयर स्टाइल ठाँटिएर हिँडेपछि यी १९ वर्षीया तन्नेरीलाई सुरुमा परिवारलाई सम्झाउनै धौ-धौ पर्‍यो । “बिस्तारै कन्भिन्स गरेँ”, उनले नेपालीपत्रसँग भनिन्, “बुझाउन त क्या गाह्रो भयो भन्या !” उनले थपिन्, “त्यो छ नि, गोरिलाज ब्यान्ड क्या, उनीहरु पि|mसेल्फ छन्, अरुभन्दा डिफ्रेन्ट । त्यसमा नुडल भन्ने गायक छ, बडो ह्यान्सी । यस्तो कपालको शैली बनाउन त्यसैबाट प्रभावित भएँ ।” गोरिलाजहरुको फरक स्टाइलले उनलाई तानिछाड्यो । गोरिला यूकेको चर्चित ब्यान्ड हो ।
मनोविज्ञ रिना श्रेष्ठ पनि अरुभन्दा फरक देखिनलाई नै तन्नेरीहरुले विभिन्न किसिमको फेशन ट्रेन्ड पक्रिने बताउँछिन् । “आफूलाई मनपर्ने कुनै नायक, गायक वा सेलिबि्रटीलाई फलो गरेर ‘सेल्फ सेटिस्फेक्सन’ लिनलाई यस्तो गर्छन्,” उनी भन्छिन्, “अरुलाई ‘रोल मोडल’ बनाएर उसकै फेसन फलो गर्नुको परिणाम नै यस्तो फेशन स्टाइल हो ।” यसमा संस्कृति, रीतिरिवाज र इकोलोजीले पनि प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
स्थिलिङ आफ्नो हेयर स्टाइलको किस्सा सुनाउँदै भन्छिन्, “केटीहरुले कपाल छोटो पार्दा केटाहरुजस्तो देखिँदो रहेछ । मैले छोटो कपाल पार्दा थरिथरिका प्रतिक्रियाहरु आए । आमाले त रिसले जगल्टाउनु नै भयो । कतिले त दाइ भनेर बोलाए ।” फिस्स हाँस्दै उनले अरुको पहिलो नजर हेयर स्टाइलमा पर्ने भएकाले यसप्रति सचेत हुनुपर्ने धारणा बताइन् ।
तर, उनलाई चिन्ता पनि छ किनभने गत वर्ष उनको हेयर स्टाइललाई दशैँमा घर गएको बेला आमाले जगल्टयाइदिएकी थिइन् । वर्ष दिन स्याहारेर राखेको त्यही स्टाइललाई हामी परिवर्तन गर्दैछौं । “घर जानुपर्ने भएपछि सोच्नैपर्छ,” एरिकाले भनिन्, “बुवाआमालाई यस्तो हेयरस्टाइल पर्दैन ।”
यसलाई मनोविज्ञ श्रेष्ठ संस्कृतिको फरकपनको कारक रुपमा अथ्र्याउँछिन् । “यो सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण र रीतिरिवाजमा रहेको फरकपनको कारण हो,” उनी भन्छिन् । तर, सामान्य फेशनकै कुरामा अभिभावकले तनाव दिन नहुने उनको धारणा छ ।
न्यु समिट कलेजबाट प्लस टु सकेका प्रवेश कार्की जोगीजस्तै देखिन्छन् । फरक यत्ति हो, खरानी दल्दैनन् । गिटारिस्टसमेत रहेका कार्की नयाँपन र सोखका कारण आफूले ‘डे्रड लक’ हेयरस्टाइल बनाएको बताउँछन् । “यस्तो कपाल पालेको देखेर ‘ओ कस्तो ट्यापे’ पो भने मलाई,” त्यो सम्झँदै उनी भन्छन्, “मान्छेले बुझ्दैनन् । म चुरोट पनि तान्दिनँ । कसरी यस्तो देखे ?” सोलुखुम्बुमा जोगी स्टाइलकै कपाल पालेर जाँदा उनलाई त्यहाँ होटलवाला साहुजीले अंग्रेजी मेनु पठाइदिए । “कहाँ तिर्नसक्नु पैसा ? पछि साहुजीलाई कुइरे होइन भनेर सम्झाएँ ।” उनले हाँस्दै अनुभव सुनाए । यही कपालले ल्याएको अर्को घटना पनि अविस्मरणीय छ उनको । भइदियो के भने सोलुस्थित आफ्नो मामाघर गएका बेला धारामा पानी लिन गएका युवतीहरु उनको कपाल देखेरै डराए ।
उनले कपाल काट्ने भनेर आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे । सैयौँले कमेन्ट लेखे “प्लीज कपाल नकाट ।” “तीमध्ये अधिकांश युवतीहरु थिए,” उनी भन्छन्, “१ सय बढी नै कमेन्ट आए ।” दिपितको फेसबुक पेजमा उनको हेयर स्टाइलकै कारण धेरै फ्यान बनेका छन् । “धेरै युवतीहरु छन् । केही विदेशी पनि,” उनी भन्छन्, “कलेजमा हेयर स्टाइलकै बखान गरेर नथाक्नेहरुको पनि ताँती छ ।”
जिङ्रिङ्ग परेको अजीब हेयरस्टाइल देखेपछि पागलै भन्छन् होला है ? “अँ धेरैले यस्तो सोच्छन्,” दिपित भन्छन् “बाहिरको मान्छेले हेरुन्, हाँसून्, कुरा काटून् त्यसले मलाई फरक पर्दैन । म त केवल आफ्नो लागि बाँचेको हुँ ।” यस्तो हेयर स्टाइल पाल्दा नबुझ्नेहरुले पागल ठान्ने गरेको उनको अनुभव छ । “बूढाहरुले बुझ्दैनन् क्या !” उनी भन्छन्, “साथीहरु भने सपोर्ट गर्छन् ।”
“नबुझिकन बाहिरबाट मान्छेलाई जज गर्नु अज्ञानीपन हो,” एरिकाको विचार हो यो, “आफ्नो सौखको कुरा हो, अरुलाई जे लागोस् न !” सोसाइटीमा रहेका अज्ञानीहरुले यस्तो कुरालाई ठूलो ‘इस्यु’ बनाउने गरेको उनको भनाइ छ । “सोसाइटी अझै ‘न्यारो माइन्डेड’ छ । राम्रो देखे पनि नराम्रो देखे पनि अरुको स्वतन्त्रतालाई ‘इस्यु’ बनाइनु हुदैन ।”
दिपितका अभिभावकले पनि उनको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेका छैनन् । जसमा प्रवेश र जेनीको पनि समर्थन छ । तर, एरिकालाई भने अलि गाह्रै पर्‍यो । राजधानीमा हालै भेटिएका यी तन्नेरीहरु आफूलाई अरु भन्दा भिन्न ठान्छन्, हेयर स्टाइल र पहिरनकै कारण ।
ब्युटीसियन अमृता श्रेष्ठ निकै व्यस्त छिन् । तन्नेरीहरुको भीडभाड छ उनको पार्लरमा । “चाडबाडको मौसममा त फुर्सद नै पाइँदैन्,” अमृता भन्छिन्, “अरुका अगाडि राम्रो देखिन सबैलाई रहर लागि हाल्छ नि Û” दशैँ र तिहारमा ठूलो जमघट हुने भएकाले पनि तन्नेरीहरु आफ्नो लुकमा अरुको आँखा अडियोस् भन्ने चाहेको उनी बताउँछिन् ।
फेसन बजारमा पंक हेयरस्टाइल, कोरियन हेयर स्टाइल, स्पाइस स्पाइक, रेजर कट, स्पाइकी, स्लाइस कट, बब, केटाहरुमाझ चल्तीमा छन् । यसैगरी केटीहरु बफ रोयल स्काइ, भि-स्यागी, रिहन्ना कट, फिदर कट, स्टेप कट, पि्रयंका कट र कोरियन हेयर स्टाइलतिर बढी आकषिर्त छन् । नेपालमा विविध किसिमका हेयर स्टाइल नभएको उनीहरुको गुनासो छ । “नेपालमा खोजेजस्तो हेयर स्टाइल एक्सपर्टहरुको अभाव छ,” प्रवेश भन्छन् । “हो”, एरिका पनि यसमा सहमत छिन्, “एउटै नाम सुनिन्छ, निल डेभिड मात्र । यसको अर्थ यो क्षेत्रमा स्टाइलिस कपाल बनाउन जान्नेहरुको कमी छ भन्ने नै हो ।”
त्यसो त आफूलाई नेपालका अल्टरनेटिभ नील डेभिड बनाउनेहरुले यस्ता युवाहरुको कपाल पटक-पटक बिगारिदिएका छन् । त्यसो त गल्ती हेयर ड्रेसरहरुको पनि होइन । फोटोको आधारमा हेयर स्टाइल बनाउन लगाउने तन्नेरीहरु पनि कम दोषी छैनन् । फेसन पारखीहरुका भिडमा नयाँ देखिने रहर लागेकाहरु आफूप्रति मानिसको आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छन् र अरुभन्दा आफूलाई फरक देखाउन खोज्छन् ।
तन्नेरीहरु आफूलाई फरक देखाउनकै लागि थरि-थरिका हेयरस्टाइल बनाउँछन् । यसमा विदेशी सांगीतिक ब्यान्ड, हिरोहिरोइन, खेलाडी र केही सिरियलहरुको ठूलो प्रभाव छ । इमेल, इन्टरनेट र टेलिभिजन टक सोहरुको पनि कम भूमिका भने छैन ।
« Model watch Nepal..